स्कुस खाँनुको अच्म्मैको फाइदाहरु ! – Yuwa Aawaj
चैत्र २६, २०७७ बिहिबार 1280
काठमाडौँ : बजारमा सजिलै र सस्तो पाइने तरकारी हो स्कुस । स्कुस बहुउपयोगी, बहु’गुणी तरकारी हो । स्कु\_सको मुन्टा, फल र जरा सबै खान मिल्छ ।
यसमा एन्टिअ’क्सिडेन्ट र विभिन्न पोषक तत्व हुने भएकाले स्वास्थ्यको लागि अत्यधिक लाभ प्रदान गर्ने तरकारी हो । स्कुस पोषक तत्वले धनी तरकारी हो ।यसमा विभिन्न प्रकारका भिटामिन, ख’निज, र फाइबरहरू पाउन सकिन्छ ।
एउटा २०० ग्रामको स्कुसमा निम्नलिखित यति धेरै पोषक तत्व पाइन्छ । स्कुसका फाइदाहरु एन्टिअ’क्सिडन्टको उप’लब्धताः स्कुसका धेरै फाइदाहरू छन् । यसलाई शरीरमा चाहिने एन्टिअक्सि’डेन्टको प्र’चुरताका कारण पनि अति’गुनिलो तरकारीको रूपमा मान्ने गरिन्छ ।
एन्टिअ’क्सिडेन्ट विभिन्न प्रकारका खाद्य पदा’र्थहरूमा पाइन्छ, जसले हाम्रो शरीरको तन्तुहरूमा हुने असरबाट बचाउँछ भने यसले शरीरभित्र हुन सक्ने तनावलाई पनि कम गर्ने गर्छ ।
मुटुको स्वास्थ्यका लागिः स्कुस धेरै खाने मान्छेमा मुटुरोगको जो’खिम कम हुने गर्छ । जस्तै, उच्च रक्त’चाप, उच्च को’लेस्ट्रोल र रक्तप्रवाहमा पनि यसले सहयोग गर्ने गर्छ ।
जनावर र टेस्ट’ट्युबमा गरिएको अनु’सन्धानले रक्त’नलीहरूलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गरेको भेटिएको छ ।
यसले रक्त प्रवाहमा सुधार ल्याउने एवं रक्त’चाप घटाउन मद्दत गर्छ । रगतमा हुने गु’लियो पदार्थको निय’न्त्रणमा सहयोगीः घुलनशील फाइबरले शरीरको पाचन प्रणाली र का’र्बोहाइड्रेडको अवशोषणलाई सुस्त बनाउँछ, जसले रगतमा चिनीको मात्रामा कमी ल्याउँछ ।
स्कुसले इन्सु’लिनलाई प्रभावित गरेर रगत हुने चिनीको मात्रा नियन्त्र’णमा सहयोग पु¥र्‍याउँछ । क्या’न्सर कम गर्नः उच्च पो’षणयुक्त फलफूल र तरकारीको उपभोगले विभिन्न प्रकारका क्या’न्सरको जो’खिम कम गर्न मद्दत पु¥र्‍याउने गर्छ ।
अध्ययनले निश्चित मात्रामा स्कुसको सेवन गर्दा त्यसमा रहेका यौ’गिकहरूले क्या’न्सर हुन सक्ने को’षिकामा त्यसको असर कम गर्ने गरेको देखाएको छ । मि’र्गौलाको कामलाई सहज बनाउनः फ्याटी लिभर डिजिज भनेको एउटा यस्तो समस्या हो ।
जसमा अत्य’धिक बोसो क’लेजो छेउमा जम्मा हुन्छ । क’लेजोमा जमेको धेरै बोसोले यसलाई ठीकसँग काम गर्न अव’रोध सिर्जना गर्न सक्छ । यसरी नियमित स्कुसको सेवन गर्दा कले’जोमा बोसो जम्ने कामलाई यसले निय’न्त्रण गर्न सक्छ ।
Prevमाथिल्लो तामाकोशी अन्तिम चरणमा, आगामी वैशाख दोस्रो सातादेखि सुरुङमा पानी हालिने !
Nextरगतमा कोले’स्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण तथा मुटुलाई स्वस्थ राख्न अचुक औषधिकाे काम गर्छ चनाले, यस्ताे छ खाने तरिकाहरु !